अक्सिजन नपाउँदा ५ सय शैप्याको वीर अस्पतालको नयाँ भवन एक हप्तादेखि खुल्न सकेन ! | Diyopost
काठमाडौं, २९ वैशाख । राजधानीका अधिकांश अस्पताल नयाँ विरामी भर्ना गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । राजधानीसहित देश भरका अस्पतालमा यतिबेला कोरोना संक्रमित विरामीहरु असपताल प्रांगणमा बसेर बेड पाइन्छकी भन्दा भन्दै मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । काठमाडौंको पुरानो विर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल परिसरमै कयाँ विरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालमा न अक्सिजन छन्, भेन्टिलेटर, आइसियु त धेरै परको कुरा भएको छ अर्थात नागरिक कोरोना संक्रमणबाट होइन उपचार नपाएर भटाभट मरिरहेका छन् ।
वीर अस्पतालका उच्च अधिकारीले आईतबारदेखि वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई ५ सय शैप्याको कोरोना अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका थिए । एक हप्ता वित्न लाग्दा पनि सञ्चालन हुन सकेन– कारण हो अक्सिजन ।
‘हामीलाई सप्लायर्सले अक्सिजन दिएन । त्यसकारण सञ्चालन गर्न सकेनौँ । नेपाली सेनाले दिएको ३० सिलिन्डर अक्सिजनले यो अस्पताल चल्न सक्दैन,’ वीर अस्पतालका फोकल पर्सन डा. अच्युत कार्कीले दियोपोस्टसँग भने,‘३० सिलिन्डर दिएर शुरु गर्न सकिने अवस्था नै छैन ।’
डा. कार्कीका अनुसार नियमित सप्लायर्सले नै अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकेका कारण अस्पताल सञ्चालनमा आएको छैन । यद्धपी आजै अक्सिजन पाए आजैदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको डा. कार्कीले बताए । ‘हिजो १ सय सिलिन्डर ५ बजेतिर प्राप्त भएको भए ७ बजेदेखि नै हामीले सेवा सुचारु गथ्र्यौं,’ डा. काकीले भने,‘हामीलाई १ सय सिलिन्डर अक्सिजन आयो भने ५० जना विरामी राख्न सक्छौँ । २ सय आयो भने १ सय जना विरामी राखेर सेवा दिन्छौँ ।’
तर, हरेक दिन अक्सिजन आउने भए मात्रै सेवा शुरु हुने उनले बताए । ‘हरेक दिन इन्स्योर हुनुपर्यो । एक दिन आएर अर्को दिन आएन भने त विरामी अन्त पठाउने कुरा भएन । कम्तिमा ५० जना मात्रै शुरु गर्न सक्यौँ भने राहत हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
अहिले वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा जम्मा २ सय ५० जनालाई सेवा दिन सकिएको उनले बताए । आइसियु २० वटा मात्रै छ ।